Qorshooyinka Cashar Bilaash ah - Abaalmarinta Abaalmarinta - Qorshooyinka Casharka Dugsiga
Bogga ugu weyn Qorshooyinka Casharka Bilaashka ah
Sababta dugsiyadu ugu baahan yihiin casharro ku saabsan sawir-gacmeedka qaawan ee internetka iyo galmada ayaa ugu wanaagsan ee lagu soo koobay oraahdan…
Nidaamkeena gaarka ah wuxuu diiradda saarayaa saameynta sawir-gacmeedka internetka ee maskaxda dhalinyarada. Waxaa naloo aqoonsaday tababarayaal kuliyada Royal ee Dhaqaatiirta Guud. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saameynta porno ee maskaxda waxaan kugula talineynaa mid aad loo heli karoMaskaxdaada ee Porno-Internet Pornography iyo Sayniska Soo Kordhinta”Waxaa qoray Gary Wilson. Faahfaahin dheeraad ah ka eeg dhinaca dhinaca midig.
Maqnaanshaha sharciga xaqiijinta da'da iyo suurtagalnimada xirxirnaansho badan oo carruurta leh helitaanka bilaashka ah ee goobaha galmada, Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta waxay go'aansatay inay ka dhigto casharro 7 casharro ah oo bilaash ah oo bilaash ah si aan dugsi u baahnayn inuu baxo. Waa lagusoo dhaweynayaa inaad ku deeqdo sadaqadeena, hadii aad dareensan tahay dhaq dhaqaaq. Eeg badhanka “Ku deeqo” dhinaca midig.
Looma baahna sawirro qaawan cashar kasta. Si aad u baarto waxa ku jira cashar kasta, u gudub bogga xirmooyinka oo dhagsii sawirka xirmooyinka waaweyn ee waddankaaga. Waxaan ku soo saarnay casharo noocyo kala duwan ah si aan u daboosho baahiyahaaga, UK, American iyo International. Waxaan haynaa cashar dheeri ah oo loogu talagalay sharciyada England iyo Wales, iyo Scotland.
Re: Galmada, Sharciga iyo Adiga: Waxay ahayd mid wax tar leh. Waxay ka heleen sheekooyinka, kuwanna waxay kicisay dood badan. Waxaana ka wada hadalnay sharci ahaanta ay ahayd in si dhab ah looga fiirsado. Ardaydu waxay yiraahdeen kuma aysan aadin wajiga inay helaan wixii galmo / sawirro ah 'waa wax dhaca markasta'. Waxay yiraahdeen way iska indha tireen maadaama aysan ahayn wax weyn. Waxaan helnay arrin aad loola yaabo. Laga soo bilaabo 3 macallin oo ka tirsan St Augustine's RC School, Edinburgh.
Sii ardaydaada arrimo badan oo ku saabsan filimada internetka iyo galmada oo la xiriirta caafimaadka maskaxda iyo jirka, kalsoonida jirka, xiriirka, hanashada, qasabka, ogolaanshaha iyo mas'uuliyadda sharciga. Tani waa habka ugu wanaagsan ee loogu diyaariyo nolosha khadka tooska ah iyo khadka tooska ah iyo in la dhiso adkeysi ka dhan ah waxyeelooyinka muddada-dheer dhici kara.
Filimada Filimka ee Internetka
Casharradeennu waxay bixiyaan 4 qaybood oo kala duwan, laakiin isku xiran oo ku saabsan mawduucan. Ardaydu waxay fursad u heli doonaan inay si qotodheer uga fekeraan mowduucan iyagoo adeegsanaya madadaalo, laylisyo is-dhexgal ah, fiidiyowyo iyo fursado looga wada hadlo meel ammaan ah iyo tilmaamaha ilaha taageero dheeraad ah
Pornography oo ku saabsan Maxkamad
Jacaylka, Filimada Qaawan & Xiriirka
Pornography Internet iyo Caafimaadka Maskaxda
Waxaan ku bixinnaa 3 casharro kala duwan, laakiin isku xiran oo ku saabsan mawduucan si loo daboolo dhinacyo badan oo kala duwan oo ka mid ah arrintaan adag. Iskusoo wada duuboo waxay ardayda baraysaa astaamaha gaarka ah ee maskaxdooda cajiibka ah, balaastigga ah ee maskaxda iyo sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysto si loogu guuleysto nolosha:
Sexting, Sharciga iyo Adiga
Muujinaya dhammaan natiijooyinka 28
Hordhaca Jinsiga, Daabacaadda Mareykanka
Jacayl, Qaawan iyo Xiriirro
Jacaylka, Pornography iyo Xiriirka, Daabacaadda Mareykanka
Pornography & Caafimaadka Maskaxda
Pornography & Caafimaadka Maskaxda, Daabacaadda Mareykanka
Pornography on Trial, Daabacaadda Mareykanka
Wasmada, Pornography & Maskaxda Dhalinyarada
Galmada, Pornography & Maskaxda Dhallin-yarada, Daabacaadda Mareykanka
Tijaabada Porn ee Weyn, Daabacaadda Mareykanka